Okuhamba phambili kwe-Instagram Bots Comparative 2021 - Yenza i-Instagram ngokuzenzakalelayo
Ama-bots we-Instagram (IG bot) zisetshenziselwa ukwenza i-akhawunti yakho isebenze ngokuzenzakalela, Ngokwesibonelo, ukushintshana, ukuphawula, imiyalezo eqondile, Landelela, ukwesulwa kokulandelwa nabanye.
Umgomo ukwandisa inani labalandeli bakho futhi wakhe abalandeli bangempela, hhayi izimoto zamanga nama-akhawunti mbumbulu.
Ama-bots we-Instagram angasheshisa ukuphathwa kwansuku zonke kwe-akhawunti yakho futhi andise inani lokuvakashelwa, abalandeli nokuchofoza kuwebhusayithi yakho.
Ividiyo yemizuzu engama-20 engezansi ichaza ngokuningiliziwe ukuthi ungasetha kanjani i-Instagram bot ukukusiza ukukhulisa ama-akhawunti akho e-Instagram..
Ama-bots we-Instagram angenza imisebenzi eminingi isebenze – njengokuthumela imilayezo kokuphakelayo kwe-Instagram ngokususelwe kuzinhloso nemihlahlandlela oyifaka ku-Instagram bot.
Lokhu kusho ukuthi uzokwandisa ukubonakala kwe-akhawunti yakho ngoba uzovela kaningi kokuphakelayo kwe-Instagram.. Kunjalo, lokhu kuzovumela abantu ukuthi bathole okuqukethwe kwakho negama lakho lomsebenzisi, pheqa i-akhawunti yakho bese, uma bethanda abakubonayo, bangakulandela.
Vikela i-akhawunti yakho ye-Instagram
Ama-akhawunti we-Instagram anokuqukethwe okubandakanyayo nokuqondiswa okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo kuzokhiqiza umsebenzi nokusebenzisana okungenzeka kuthathwe njengokujwayelekile futhi kuholele ekuvakaselweni kwephrofayili yangempela.. Lokhu kungahlala ngaphansi kwe-radar yanoma yikuphi ukuhlolisiswa yi-Instagram..
Ngakolunye uhlangothi, i-akhawunti ye-Instagram enokuqukethwe okungaqondakali nokungabalulekile, ukukhomba okuzenzakalelayo nokungalungiswa kahle, sebenzisana nabantu abathola ukuthi lo msebenzi uyimbumbulu noma ugaxekile.
Wonke umuntu wake wakuthola lokhu esikhathini esedlule, kusuka kuma-MDs azenzakalelayo angahambisani nabalandeli abangahleliwe kuma-niches ahlukile.
ngo-2017, I-Instagram icele ukuvalwa kwezinsizakalo eziningi, ikakhulukazi i-Instagress, kepha kunezinye izindlela.
Ama-bots amakhulu we-Instagram
Sizizame zonke futhi imiphumela ikhonjisiwe ngezansi:
Isivivinyo Amahora angu-24 ngo0,izindleko 99 EUR
Ukuzenzakalela kwe ukukhetha isitayela sendaba
Ukuphepha okuhlanganisiwe kanye izilungiselelo zommeleli ezitholakalayo
Amasethingi nokuhlunga isivinini esiguqukayo siyatholakala
Inflact (Phambilini u-Ingrammer)
Isivivinyo samaviki angu-2 se izindleko 32 EUR
Isitayela ezishintshayo Njengo / Landela / Yeka Ukulandela
Izici ze- ukuphepha okujwayelekile nommeleli
Izilungiselelo eziyisisekelo zejubane kanye izinketho zokuhlunga
3 izinsuku isilingo samahhala
Ukuzenzakalela kwe Thanda / landela / awusalandeli / ubeke amazwana
Izinketho ukuphepha okuncane futhi akukho mmeleli
3 izilungiselelo wejubane, ukuhlunga okuthuthukile nokukhawulela
Isivivinyo sezinsuku ezi-3 ngo-1 EUR
Ukuphepha nokusizwa ngu ummeleli otholakalayo
Ukulungiswa kwejubane futhi ukuhlunga kuyatholakala
Ukubonisana mahhala futhi 5 izinsuku isilingo samahhala
a umphathi we-akhawunti
Ikheli I-VPN / IP ihlukile ukuphepha
Izilungiselelo zomsebenzi isivinini okuzenzakalelayo
Uhlelo lwe I-Starter imahhala unomphela
Ukuzenzakalela kwe Thanda / phawula
Ukuphepha okulingene ne- ummeleli owakhelwe ngaphakathi
Ukulungiswa kwejubane ehlukile ezishintshayo
Ukuzenzakalela kwe Ngithanda / ngiyalandela / angisalandeli / ngiphawula / ngibuka izindaba / ngithumele kabusha / i-DM
Ukuphepha okuhlanganisiwe kanye proxies abazinikele
Ukulungiswa kwejubane iyatholakala
5 izinsuku isilingo samahhala
Izilungiselelo kuphela elilungile liyatholakala
Ukuzenzakalela kwe Ngithanda / ngiyalandela / angisazilandeli / ngibukela izindaba
Ukuphepha okujwayelekile nge- ummeleli owakhelwe ngaphakathi
3 izilungiselelo zesivinini ngezihlungi ezihlakaniphile
Ukuzenzakalela kwe Ngiyathanda / ngiyalandela / angisalandeli
Cha ukulungiswa kwejubane
Iyiphi inqubo okufanele uyilandele ukukwazisa ngobukhona babalandeli bamanga?
I-Instagram izama ukumisa ama-bots isebenzisa amasu ambalwa:
Isaziso “Phusha” ukukwazisa ukuthi basusa imilayezo “inauthentiques” ezitholakele futhi zenziwa ngohlelo lwesithathu. Imininingwane ye-akhawunti yakho imakiwe njengengcuphe ngoba uyabe nomuntu wesithathu.
Abakwa-Instagram basakaza lesi saziso ukukhuthaza amakhasimende ukuthi ashintshe amaphasiwedi awo, yini okukuxhuma enkampanini yangaphandle (I-bot Instagram)
Esinye isaziso sikhombisa ukuthi usebenzisa insizakalo leyo “ikusiza ukuthi uthole abangane nabalandeli” futhi vimba i-akhawunti yakho ngesikhathi esinikeziwe.
Ngalokho, lokhu kuvame ukwenziwa ukuthi usebenzisa insiza ezenzakalelayo ye-Instagram engaphephile noma ukuthi wenza ukuthandwa kwakho noma ukuphawula kwakho kungazelelwe. Amazwana we-bot athathe i-Instagram futhi athumele ifulegi elibomvu ku-Instagram – ngakho-ke qaphela ukuthi ungasebenzisi i-robot ye-IG ngendlela engafanele.
Uma kwenzeka elilodwa lamaphuzu amathathu angenhla, ngakho zama ukungakhathazeki. Kunconywa ukuthi uyeke ukuzama ukuxhumana nge-akhawunti yakho, futhi ungashintsha i-Instagram bot yakho, hlela ukuhwebelana kwakho ngejubane elincane kakhulu. Ibhulokhi lizonyamalala esikhathini esiboniswe kusaziso (imvamisa iviki) futhi ungaqhubeka nokusebenzisana.
I-Instagram ayiphoqi noma yisiphi isenzo ngaphandle kokuthumela izaziso ezi-3 ngenhla.
Akuvamile ukuthi i-akhawunti yakho igqekeziwe noma ifakwe ebucayini i-IG bot, ngoba la marobhothi akhona ngokukhethekile ukusiza amakhasimende abo. Lawa marobhothi ancike ekuvikelweni kwedatha yakho ne-akhawunti yakho.
Kunendlela eyodwa kuphela yokuqinisekisa ukuthi i-akhawunti yakho ye-Instagram ithola ukuvikeleka okuphezulu kakhulu., futhi lokho ukusebenzisa amandla ommeli ku-akhawunti yakho.
Ummeleli ushintsha indawo lapho i-bot ixhuma khona, ukuze ingenzi izenzo eziningi ukusuka endaweni eyodwa, yini ezojwayele ukubikwa njengokuziphatha okuhlukumezayo.
Insiza yethu yommeleli esiyitholile yile FrogProxy. Le yisevisi yommeleli weselula, okusho ukuthi ukuxhumana kuyefana nalokho kwe-smartphone, ngakho akabukeki esolisa ku-Instagram.
Bheka i- Izici ze-FrogProxy lapha futhi uqiniseke ukuthi uma usebenzisa ezokuxhumana ezishintshayo, uvikela i-akhawunti yakho ngommeleli.
Ukukhohlisa: Njengoba usengathola lezi zaziso ezithile lapho wenza i-akhawunti i-automate, kunconywa ukuthi uhlale uphephile futhi usebenzise i-bot ephephe kakhulu ekhona.
Yini ukusebenza nokusebenza kwezimpawu ze-Instagram bots?
Siphatha ama-akhawunti e-Instagram ahlukile – ngakho-ke bekufanele sihlole i-10 ephezulu ukuze sibone ukuthi iyiphi i-Instagram bot eyenza kahle kakhulu, nokuthi iyiphi ephephe kunazo zonke!
Yimaphi ama-bots amahle kakhulu we-Instagram?
Intengo: 9,99 EUR ngenyanga
Isizathu sokuthi sithande i-IBF ngaphezu kwamanye ama-bots yingoba ingeyesibili eshibhile emakethe futhi akuwona wonke amanye amathuluzi atholakalayo anikezela ngezici ezahlukahlukene kuleli phuzu lentengo..
Imisebenzi ezenzakalelayo esheshayo: Yebo – kunezivinini zomsebenzi ezizenzakalelayo, okusho ukuthi ungasetha ijubane lakho. I-IBF iphinde inikeze ishejuli yokuqukethwe emnandi, ukuzenzakalela kwemiyalezo eqondile nokuhlaziywa, okwenza le Instagram bot ibe yisinqumo esingcono kakhulu ngoba inezici eziningi, ivuliwe, kulula ukuyisebenzisa futhi ngaphezu kwakho konke okungabizi kakhulu njalo ngenyanga.
I-VPN nokulungiswa: Dala i-VPN yakho usebenzisa le bot.
Ukuphepha: Izinhlelo zokuphepha ezihlanganisiwe kanye nokukwazi ukusebenzisa i-proxy yakho ephathekayo ukuthola ukuthula kwengqondo okuphelele. Okuwukuphela kwento ebabazekayo kule sevisi ezenzakalelayo ye-Instagram ukuthi ayikho insizakalo yamakhasimende., kepha lokho akumangazi kuleli phuzu lentengo. Uma unolwazi lokuzenzekelayo, ngeke kube yinkinga.
Ama-bots afanayo: Uma uthanda ukusebenza komlandeli we-Bot ka-Instagram kepha udinga usizo oluvela kumakhasimende, khona-ke uKaputeni Wezenhlalakahle angaba yisinqumo esihle.
- I-TikTok Bot ehamba phambili emakethe – Inflact (ngaphambili i-Ingrammer)
Intengo: 49 EUR ngenyanga
Isivinini somsebenzi esizenzakalelayo: Yebo – anemingcele edingekayo yokukuvikela. Zinezivinini zomsebenzi eziningiliziwe ezilingisa ukusebenza kwangempela komuntu, izibalo nokuhlunga.
I-VPN nokulungiswa: Kufakiwe lapho kudalwa i-akhawunti.
Ukuphepha: Izici zokuphepha ezijwayelekile ozilindele kwisevisi ezenzakalelayo.
Indawo yesibili: I-Boostgram iyithuluzi elifanayo elikuvumela ukuthi uthuthukise i-akhawunti yakho ye-instagram, yize ingasebenzi kahle njenge-Inflact.
Intengo: 13 EUR ngenyanga
Isivinini somsebenzi esizenzakalelayo: Izilungiselelo zejubane ezizenzakalelayo zilungile kulokhu – ngezilungiselelo ezijwayelekile, ngeke weqe imikhawulo ebekwe yi-Instagram.
I-VPN nokulungiswa: Akukho ukusethwa kwe-VPN noma usizo.
Ukuphepha: Ama-Instazoods abekhona isikhathi eside impela futhi aziwa emakethe ngensizakalo yawo ethembekile yamakhasimende.. Eminyakeni edlule, bakwazile ukuzivumelanisa nokuvuselelwa kwe-Instagram nezinguquko, okungaba yinto enhle kumakhasimende kuphela. Udinga lolu hlobo lwesipiliyoni nolwazi kakhulu uma ucabanga ngokujulile ngokukhulisa ama-akhawunti wakho we-Instagram amaningi..
Lesi akusona isipiliyoni esihle kakhulu noma isikhombimsebenzisi esibonakalayo, kepha insizakalo yamakhasimende iphelele !
Ama-bots afanayo: IGramista ifana kakhulu ne-Instazood.
#4 – I-Instamb
Isivinini somsebenzi esizenzakalelayo: Izinketho zejubane ezijwayelekile.
I-VPN nokulungiswa: Azikho izilungiselelo zommeleli owakhelwe ngaphakathi.
Ukuphepha: Iphakheji eyisisekelo ikunikeza ukuphepha okujwayelekile, kepha akekho ummeleli wendabuko oswele kule bot. Ungakhokha umphathi we-akhawunti ukugcina i-automation yakho ingaphakathi kwemikhawulo.
UJoli bot, kulula ukuyisebenzisa ngezinketho ezinhle zokukhomba.
Ama-bots afanayo: I-kicksta
#5 – I-Social Sensei
Intengo: 255 EUR ngenyanga
Isivinini somsebenzi esizenzakalelayo: Kukhona izilungiselelo zemisebenzi yejubane ezenzakalelayo enaleli thuluzi futhi ziphatha zonke izinyathelo zenqubo ezishintshayo yemidiya yokuxhumana nawe. Lokhu kufaka ukubuyekeza ukunquma isivinini somsebenzi esisebenza kahle kakhulu esizokuvimbela ekubikeni..
I-VPN nokulungiswa: Uthola ikheli lakho le-VPN ne-IP.
Ukuphepha: Lindela ukuthola umphathi we-akhawunti ozinikele ukukusiza kuzo zonke izinyathelo zendlela. Lapho uqala umkhankaso, uzodinga uhlu lwama-hashtag nama-akhawunti ofuna ukuwasetha njengezinjongo zokuzenzekelayo futhi iqembu labo liphatha konke okunye. Imiphumela imvamisa isuselwa kukhwalithi yokuqukethwe nezilungiselelo ozisebenzisayo, Noma kunjalo, sibone ababhalisile abasha abangu-500-1000 ngenyanga nge-Social Sensei.
Ama-bots afanayo: I-Upleap inikeza umphathi we-akhawunti ozinikele ukukusiza ukhulise abalandeli bakho.
#6 – Inhlanganisela
Intengo: 18 EUR ngenyanga
Isivinini somsebenzi esizenzakalelayo: Ukusetha isivinini okuhlukile kokuzenzakalela kwehla ipulatifomu.
I-VPN nokulungiswa: : Ungangeza ummeleli wakho usebenzisa ithuluzi lommeleli elakhelwe ngaphakathi.
Ukuphepha: Ipulatifomu ephephe kakhulu futhi engaguquguquki – ungakhetha ngesandla ama-akhawunti ofuna ukulandela ngomkhondo ngaphambi kwesikhathi, bese uCombin ezokhipha izicelo nge-Instagram, kukunika ukulawula okugcwele.
Ama-bots afanayo: Le bot ihluke ngokuphelele ekusebenzeni kwayo – akekho omunye osebenzisa ukukhetha mathupha ngezenzo ezithile.
#7 – I-InstaBoss
Intengo: 11.90 EUR ngenyanga
Isivinini somsebenzi esizenzakalelayo: Amathuluzi esimo sobuhlakani bokufakelwa asetshenziselwa ukukhawulela imisebenzi yakho ngaphambi kokuthi i-Instagram ivimbe i-akhawunti yakho. Izivula kabusha ngokuzenzakalela ngemuva kwalokho.
I-VPN nokulungiswa: Isoftware ikuvumela ukuthi umise ummeleli, futhi kuya ngohlobo lokunikezwayo, ungathola ama-proxies angaba ngu-10.
Ukuphepha: Bathi bavikelekile ngo-100% ngoba ukunikezwa kwabo ngakunye kufaka ama-proxi azinikele. Yini enye, idatha yakho ibethelwe futhi uyazuza ekusekelweni kwe-premium, okushesha impela.
Ama-bots afanayo: UJeffrey
Intengo: 29.95 EUR ngenyanga
Isivinini somsebenzi esizenzakalelayo: Akushiwo ukusethwa kwejubane kwemisebenzi ezenzakalelayo.
I-VPN nokulungiswa: Lindela i-akhawunti ngayinye ye-Instagram ukuthi isebenze nommeleli wayo we-HTTP.
Ukuphepha: Le bot yakhelwe ukulingisa imisebenzi yezenhlalo yansuku zonke ku-Instagram kuze kube ngokuphindwe kayishumi ngokushesha kunomuntu ojwayelekile ongayiqedela ngamunye. I-bot ingaba yingozi, ngoba isebenza ngokuqhubekayo amahora angama-24 nsuku zonke, futhi abasebenzisi baba sengozini yokweqa kaninginingi imingcele yokuzibandakanya ye-Instagram.
Ama-bots afanayo: I-Growthoid
# 9 - I-Instavast
Isivinini somsebenzi esizenzakalelayo:I-Instavast ikuvumela ukuthi ulungise ijubane lokuzenzekelayo. Lesi sici singasiza uma ufuna ukunciphisa ubungozi i-Instagram ezokuthola.. Unokukhetha phakathi kwezivinini ezi-3 eziqala ngokunensa, evamile futhi esheshayo. Isethingi esinconywayo sejubane lomsebenzi wakho kufanele sibe “Ukuzila” lapho uqala ukusebenzisa izinsizakalo zabo.
I-VPN nokulungiswa: :
Izinhlelo zokusebenza zommeleli ezakhelwe endaweni zingalandwa futhi zifakwe kuselula yakho noma kwi-PC.
Ukuphepha:Izici zokuphepha ezijwayelekile, Noma kunjalo, bathi insizakalo yabo yokukhula ihambisana ngokuphelele nemigomo yesevisi ye-Instagram.
Ama-bots afanayo: UNitreo
Intengo: 95 EUR ngenyanga
Isivinini somsebenzi esizenzakalelayo: Banamasethingi adingekayo ukuvikela i-akhawunti yakho nakuwebhusayithi yabo ithi i-bot ihambisana nemigomo yesevisi ye-Instagram.
I-VPN nokulungiswa: Inikeza ukuthenga kwama-proxy kwamahhala nokusetha. Isistimu yabo ibheka ukunikezela ukuphepha kommeleli kuwe..
Ukuphepha: Ngokuya ngezokuphepha, I-Ektora inikeza isixazululo esihlukile futhi esisha ukuqinisekisa ukuthi abasebenzisi bayo ababonwa njengogaxekile noma abavinjelwe. Yonke imisebenzi ezenzakalelayo isuselwa ku-AI futhi ipulatifomu isebenzisa ukubonwa kobuso futhi ilingisa inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza lweselula lwe-Instagram. Insizakalo yabo yokukhula isuselwa ekuziphatheni komuntu ngokuya ngomsebenzi we-Instagram, le yindlela abaphatha ngayo ukuthuthukisa izithameli ezigcwele abasebenzisi bangempela.
Ama-bots afanayo: I-Growthsilo
Q. YINI IBEST INSTAGRAM BOT YOKUVELA
A. Kuwo wonke ama-bots esiwatholile, sincoma i-Instagram Follower Bot ngoba isebenza ngokushesha okukhulu, ikakhulukazi kuvoti ye-hyper pro.
Q. NGINGAYIVIKELA KANJANI I-AKHAWUNTI YAMI
A. Ungavikela i-akhawunti yakho ngokusebenzisa isevisi yommeleli. Ngale ndlela, ikheli lakho le-IP lizoshintsha ngokuzenzakalela.
Q. YINI I-IG BOTS ENOKUPHEPHA OKUHLE
A. I-IBF ne-Ingramer yizi-bots ezinhle kakhulu ze-instagram zokuphepha. Ungavikela i-akhawunti yakho ngokusebenzisa isevisi yommeleli.
Q. I-AKHAWUNTI YAMI IYOVALWA
A. Konke kuncike ekutheni uyiphatha kanjani i-akhawunti yakho nokuthi usebenzisa ummeleli..
Q. NGABE KUKHONA AMABHODI KU-INSTAGRAM?
A. Ama-bots amaningi we-Instagram ayafana ngokuzenzekelayo futhi ayalandela, ngokuya nge-bot ngayinye.
Q. INSTAGRAM BOTS KUSEMTHETHWENI?
A. Izinkampani zemidiya yezenhlalo zingase zihlise amanye ama-bots, kuya ngalokho okwenziwa yi-bot ngayinye. Yize zingekho emthethweni.
Q. NGABE KUKHONA AMABHODI E-INSTAGRAM ASEBENZAYO?
A. Ama-bots amaningi anemiphumela emihle, ikakhulukazi i-IBF ne-Ingramer.
Q. YENZA INSTAGRAM BOTS USASEBENZA NGO-2020?
A. Amanye ama-bots ayekile ukusebenza, futhi eminye imisebenzi kungenzeka ingasasebenzi. Noma kunjalo, ama-bots amaningi ohlwini olungenhla asebenza kahle impela.
Q. Ngabe ama-INSTAGRAM BOTS AYALUSEBENZA??
A. Yebo, ungathola abalandeli bangempela masinyane kuye nge-niche yakho.
23 Izindlela zika-2021Izindaba ze-Instagram Automation